FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA SHEPADOODLE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Shepadoodle Dog
Alika mpiandry ondry alika / Poodle mifangaro
Beau the Shepadoodle puppy amin'ny faha-7 volana— 'Izy dia avy amin'ny a fako zaza 9 salama . Ny rainy dia mpiandry alemanina iray sable ary ny reniny dia Standard Poodle mainty. Ny iray amin'ireo toetrany lehibe indrindra ezahantsika tratrarina dia ny palitaony tsy mandatsaka. ' Sary natolotry ny My-Shepadoodles
Ny Shepadoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpiandry Alemanina ary ny Poodle ( Malagasy , Miniture na Kilalao ). Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Bailey. Efa ho 11 volana izy. Ny dadany dia a Mpiandry Alemanina ary ny reniny dia Poodle mahazatra . Milanja 76 pounds eo ho eo izy. Alika tsara fanahy sy be fitiavana i Bailey. Mijanona eo anilako izy rehefa eo akaiky aho ary hanaraka ahy na aiza na aiza. Tiany alika hafa SY ankizy . Saro-kenatra be izy mihaona amin'ny olom-baovao nefa rehefa manapa-kevitra izy fa tiany ilay olona lasa saika ny sakaizany araka ny fiantsoan'ny fianakaviako azy. Tian'ny rehetra ny mihaona aminy! Izy tamin'ny 10-taona-tanora dia mailaka haingana hianatra mipetraha, mihozongozona ary midina . Ny teny fampatsiahivana dia andao ary tsy niandry ela akory izy hahafantatra ny baikony. Fiofanana ao an-trano dia tsio-drivotra niaraka taminy. Izay rehetra nolazaiko azy dia alika mahavariana izay be vava ary mahay mandanjalanja ho an'ny mahasoa azy! Bailey dia goofball lehibe ihomehezako azy isan'andro! '
Bailey the Shepadoodle eo amin'ny 11 volana eo ho eo
Kyser the Mpiandry Alemanina SY Poodle mahazatra afangaro amin'ny 1 1/2 taona— 'Kyser dia tovolahy sambatra. Tiany daholo ny olona ary alika hafa . Tena mankatò izy, tsara amin'ny karazana fiofanana rehetra. Mahazo ny azy isika fisehoana ankapobe vita isaky ny 3 herinandro. Kyser dia nahafaly ny fianakavianay, na dia manana fotoana 'Kyser bratty moment' aza izy rehetra dia mbola tia ny toetrany tsara sy ny toetrany mahafinaritra. '
Rudy the Shepadoodle amin'ny faha-9 taonany
'Magellan ity, 50% Mpiandry Ondry fotsy , dimampolo% Red Standard Poodle (crème sy Shepadoodle mena) eo amin'ny iray taona eo ho eo. Miantso azy ny tompony ... 'Mamiratra' !! '
Beau the Shepadoodle puppy amin'ny volana 7
fifangaroana volamena retriever sy akoho spaniel amidy
Beau the Shepadoodle toy ny alika kely amin'ny 4 volana
Beau the Shepadoodle puppy amin'ny volana 4, sary natolotry ny My-Shepadoodles
Ellie the Shepadoodle amin'ny 1 taona (Mpiandry Alemanina / hybrid Poodle Standard) - 'Misaotra an'i Shannon avy amin'ny Shamrock Kennels an'i Shannon namela anay handray an'io alika mahafinaritra io dia mbola reharehany sy fifalianay hatrany!'
sarin'i chihuahuas feno rà
Ellie the Shepadoodle amin'ny taona 1 (Alika mpiandry ondry / Standard Poodle alika mifangaro)
Ellie the Shepadoodle amin'ny 11 volana (Alemanina mpiandry ondry / Standard Poodle alika mifangaro)
Ellie the Shepadoodle amin'ny faha-5 volana— 'Alika mahafinaritra izy, manana toetra milamina ary tena manan-tsaina. Efa iray volana mahery izao no nanananay azy ary tsy afaka mifaly miaraka aminy fa tafiditra ao amin'ny fianakavianay misy zaza roa sy alika roa hafa. '
Ellie the Shepadoodle ho alika kely 4 volana miaraka amin'ny kilalaony
sarin'i mix chihuahua dachshund
Ellie the Shepadoodle ho alika kely 4 volana
Alika zanak'alika kely Shepadoodle mainty
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Shepadoodle
Sary Shepadoodle 1
Sary Shepadoodle 2
Sary Shepadoodle 3
heeler manga mifangaro amin'ny collie sisintany
1 taona basset hound
saintature mini bernard amidy
alika lalao pitbull terrier amerikana
mixeran'ny labozia mainty alemana